Inkqubela phambili yabantu kunye neDell Technology yeHlabathi | Martech Zone
Inkqubela phambili yabantu kunye neDell Technology yeHlabathi
NgeCawa, Meyi 13, 2018 Douglas Karr
Ukuba uhoyele ubuchwepheshe kuphela kwimithombo yemithombo yeendaba, unokucinga ukuba iimoto ezizimeleyo zibulala abantu, iirobhothi zithatha imisebenzi yethu, kwaye itekhnoloji isikhokelela kwintshabalalo. Njengabathengisi, ndicinga ukuba kubalulekile ukuba singanikeli ingqalelo kwi-app elandelayo yokubulala phaya, kufuneka siqwalasele indlela itekhnoloji ebuchaphazela ngayo ubomi kunye nokuziphatha kwabathengi kunye namashishini.
Iinyani malunga utshintsho lwe digital zichasene kakhulu.
Masiqale ngezithuthi ezizimeleyo. Abantu bayaqhubeka nokufa ezimotweni, bebulala ama-3,287 amaMelika mihla le. Iimoto ezikrelekrele azibulali… ziya kusindisa ubomi. Ngapha koko, ndiya kuqikelela ukuba sele kunjalo. Endleleni eya kwiDell Tech World eLas Vegas, ndibhale inqaku endleleni ndichaza ezinye ze Iimpawu zeChrysler Pacifica entsha Bendirentile. Andithandabuzi ukuba imisebenzi ezimeleyo yale moto inciphise umngcipheko wokungena kwiingozi kuhambo lwam lweekhilomitha ezingama-5,000 XNUMX.
Ukuthatha imisebenzi? Ngelixa konke ukuqhubela phambili kwitekhnoloji kususa isidingo semisebenzi ethile, imisebenzi emitsha ilapha. Kwiminyaka engamashumi amathathu eyadlulayo, kwakungekho mntu wayecinga (kubandakanywa nam) ukuba ndiza kuqhuba iarhente yedijithali kwaye ndivelise iipodcast kwinkampani eyaqala ngokuthengisa iikhompyuter ezenziwe kwigaraji. Ndinamawaka oogxa abafumana imbuyekezo kwimisebenzi engazange ibekho kumashumi ambalwa eminyaka eyadlulayo.
Ndingaba mbalwa xa kufikwa kumba wokuzenzekelayo. Ndingumntu ongenathemba okholelwa ukuba oomatshini bokuzenzekelayo abathathi imisebenzi; isusa izithintelo ezingakumbi. Njengenxalenye yeli xesha le Izibane ipodcast, senziwe udliwanondlebe nomsunguli we I-DAQRI, yinkampani yokwenyani eyongeziweyo edibanise isoftware kunye nezixhobo zenkqubo kwinkqubo ebizwa ngokuba yiWalesense.
Hlanganisa umsebenzi onezakhono kunye neqonga le-AR elinjenge-DAQRI elinokuveza amanqaku, imiyalelo, kwaye udibanise nengcali ngexesha lokwenyani… kwaye umsebenzi anganakho ukwenza uthintelo nolungiso lolungiso kwizixhobo abanokungabinakho noqeqesho kuzo. . Ke, oko kunokwandisa amathuba ethu omsebenzi, endaweni yawo.
Itekhnoloji iya isoloko isebenza ngokukuko. Ukugcinwa okwandisiweyo, amandla ekhompyuter, kunye neqondo lokudluliswa kwedatha ngokunciphisa kakhulu iiprofayili zamandla kunceda ukunciphisa amandla ngeyunithi nganye yomsebenzi, hayi ukuyinyusa. Kwaye iyasinceda ukutshintsha amashishini emveli ebesingacingi ukuba angaphinda abuye. Iifama, umzekelo, kuyonyusa isivuno seefama ngama-390% ngokuzihambisa ngaphakathi, ukulungisa okungabizi kakhulu, izibane ezifikelelekayo ezilungiselelwe isityalo ngasinye kunye nokunciphisa isidingo samanzi ngama-95%. Ukulima ngaphakathi kungenza ukutya okunesondlo kufikeleleke kwaye kufikeleleke kuye wonke umntu okwiplanethi.
Ndiyaqhubeka nokubalumkisa abathengi bam ukuba sikwinguqulelo entsha yetekhnoloji. Amandla ekhompyuter atshabalalayo, isantya esiphezulu sonxibelelwano ngaphandle kwamacingo, kunye nokugcina okungenamda kuvula isango kukubhadla okungeyonyani, ukufunda okunzulu, ukufunda ngomatshini, ukusetyenziswa kolwimi kwendalo, kunye Internet Yezinto.
Ayikathengiswa? UGoogle usandula ukukhupha idemo yayo Umncedisi weGoogle lonto kufuneka itshintshe ingqondo. Umncedisi kaGoogle ukwicala eliphambili-eyalela isixhobo sakho se-IoT ukuba sikwenzele idinga. Ubunkunkqele bokuqhubeka kungangcwaba abakhuphiswano bakaGoogle abanjengoApple kunye neAmazon ukuba abakwazi ukuqhubeka. Ngelixa oko kungavakali kufanelekile, khumbula ukuba abantu zange bacinge ukuba iNokia kunye neBlackberry bayakuphulukana nolawulo lwabo, nokuba.
Izifundo azikho kwiinkampani zetekhnoloji, sisifundo kuyo yonke inkampani. Yonke imveliso kunye nenkonzo kwiplanethi zinokuphuculwa okanye zitshintshwe ngetekhnoloji yobuchwephesha. Yonke inkampani inokwenza unxibelelwano nomthengi obengekho ngaphambili. Inkqubo yeHVAC yasekhaya ithathelwa indawo kwiveki ezayo ngenkqubo entsha, esebenzayo ngakumbi.
Ngelixa ndikhangele phambili kwikhaya elipholileyo kunye netyala elisezantsi lamandla, eyona nkqubela phambili inkulu kukuba inkampani ifaka inkqubo ye-thermostat kunye nenkqubo yokubeka iliso. Inkqubo iza newaranti yeminyaka eli-10… kwaye inkqubo yokubeka iliso iya kuthi ngokuqinisekileyo ilumkise inkampani yam ye-HVAC ukuba kukho nayiphi na imiba. Le nkampani yenkonzo ngoku ine-10 yeminyaka yokunxibelelana ngokuthe ngqo kumthengi wayo ngeli qonga- kungekho mfuneko yeqonga lomntu wesithathu ukuze lindenze spam. Le yeyona nkqubo ilungileyo yokugcina abathengi, nanini na. Kwaye, njengomthengi, ndiyalwamkela unxibelelwano!
Kunyanzelekile ukuba inkampani yakho iqale ukucinga ngendlela onokuyithatha kwaye ulawule ishishini lakho ngaphambi kokuba inkampani yakho iphele.
Ukhuseleko lweWebhu luyichaphazela njani i-SEO
Usuku lokubhiyozela omama!